Isethi ye-manicure - Iyini into ngayinye? | Bezzia
Siyathanda ukuba izandla zethu zibe zinhle ngaso sonke isikhathi, ngoba nazo zivame ukusho okuningi ngathi. Ngakho-ke, uma ungomunye walabo abazama izinhlobo ezahlukene zemiklamo nemibala, yisikhathi sokukhuluma mayelana isethi ye-manicure. Uyazi ukuthi ithuluzi ngalinye lenzelweni?
Ngoba bekungeke kube okokuqala sithenga a isethi ye-manicure futhi sicabanga ukuthi akuzona zonke esizothola umdlalo ofanayo. Ngakho-ke ngaphambi kokuba siye phambili, kuhlale kungcono ukwazi ukuthi iyiphi ingxenye ngayinye eyakhiwe ngayo izosetshenziselwa futhi ngokuqinisekile kusukela lapho kuqhubeke sizokwazi ukujabulela okuphindwe kabili.
1 Isethi ye-manicure: i-nail polish
2 Ithuluzi le-cuticle pusher
3 I-Cuticle nippers kanye nesikelo
4 ama-nail nippers
5 umbese woboya
6 Amathuluzi ahlanganisiwe
Isethi ye-manicure: i-nail polish
Elinye lamathuluzi esivame ukulithola kuwo wonke amasethi e-manicure yileli. Inokwakheka kukanxantathu phezulu futhi kuyiqiniso ukuthi asazi njalo ukuthi kwenziwani, kodwa sizokutshela ukuthi ukuhlanza izinzipho. Ngoba ngemva kokuwasika noma ukuwafaka, okunye ukungcola kungase kuqoqwe ngaphansi kwawo futhi leli thuluzi linendlela ephelele yokulisusa. Ingabe uyisebenzisa njalo?
Ithuluzi le-cuticle pusher
Ngoba akufanele sinqume njalo ama-cuticles ezinzipho. Kunezikhathi eziningi lapho siye khona ukuyokwenza inzipho futhi sibona ukuthi izikhungo zobuhle zine kanjani ithuluzi lokusunduza i-cuticle ngaphandle kokuyikhipha. Ukuze wenze lokhu, udinga ithuluzi eline-spatula noma i-spoon shape, eliyindilinga phezulu. Ngakho-ke i-cuticle izosuswa, ikakhulukazi uma le ndawo iqinile. Manje kuzoba yisikhathi sokuqala nge-manicure yethu ngokwayo!
I-Cuticle nippers kanye nesikelo
Futhi kuma-cuticles sizoba namathuluzi amabili amakhulu. Ngakolunye uhlangothi, izikhali, okuzoba yizo ezinamathiphu abukhali futhi amahle kakhulu, kanye nesiphetho esigobile. Yiqiniso, ngokuwabona nje, sizovele siqaphele umehluko ngesikelo esivamile. Ngoba lezi zincane kakhulu ngakho zenzelwe ukusika ama-cuticles kuphela. Ngenkathi amaphinifa nawo enza umsebenzi ofanayo nesikelo, kodwa ngomphetho obukhali kakhulu ukukwazi ukusika isikhumba esishiwo.
Yebo-ke, uma sikhuluma ngama-cuticle nippers, asifuni ukuthi abafake izinzipho nabo basale ngemuva. Ziphelele ukuze zikwazi ukusika futhi ziphinde zilolonge izinzipho. Kodwa zenzelwe lezo zinzipho eziminyene, ezandleni nasezinyaweni. Ngakho-ke, ukuze ungalimazi indawo okufanele uphathwe ngayo, khumbula ukuthi isetshenziswa kuphela kulesi simo lapho kunendawo eminyene efana ne-nail engakwazi ukusikwa ngesikelo.
Kukhona elinye ithuluzi okungenzeka singalisebenzisi kakhulu, nakuba kwezinye izimo lizoba yisisekelo. Uma sinesikhumba esithile esiqhelelene nendawo yezinzipho, sizosebenzisa lommese. Nakuba ingakabunjwa njengombese njengoba siwazi. Imayelana ikhanda elinensingo ecolekile, emise okwekama eliyisicaba. Ngokuyidlulisa nje, sizobe sisusa lezo zikhumba esezivele zivaliwe, ngaphandle kwenkinga enkulu. Kwesinye isikhathi, ngaphakathi kwesethi ye-manicure sithola enye efanayo kodwa enomumo 'V'. Zombili zinomsebenzi ofanayo.
Kwesinye isikhathi sibuye sibone ukuthi kanjani ithuluzi elifanayo linekhanda eliphindwe kabili, esikhundleni selilodwa nje. Kodwa akukho okumangazayo ngoba izoba nenhloso efanayo naleyo ebesiphawula ngayo. Okusho ukuthi, kungase kube khona ohlanza izipikili futhi aqhube ama-cuticles ngesikhathi esifanayo. Ngakho ngaleli thuluzi nje, singenza imisebenzi emibili ngesikhathi esisodwa.
Akusho ukuthi amafayela ezinzipho azophinde avele kusethi ye-manicure, sonke esiyazi kahle, kanye nama-tweezers ngisho nama-nail clippers.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Isethi ye-manicure - Iyini into ngayinye?
Izitayela ezinezikhindi zentwasahlobo